Momba anay - Yuhuan Kalilong Metal Products Co., Ltd.
Ny orinasanay dia miorina amin'ny morontsiraka mahafinaritra ny Ranomasina China Atsinanana, Yuhuan, izay antsoina hoe "valan-tsokosok'i Shina" any Zhejiang. Ny orinasanay dia eo andrefan'ny seranan'i Wenzhou sy avaratry ny seranam-piaramanidina Taizhou, mankafy ny fitaterana an-dranomasina, an-tany sy an-habakabaka mety tsara. Niorina tamin'ny 2011, ny orinasanay dia mpanamboatra matihanina entona manafosafo basy, basy mirehitra, sns. manarona faritra mihoatra ny 3000 metatra toradroa, ary manana mpiasa teknika maherin'ny 100 sy mpiasa R&D. Be ny hery teknikanay, ary mandroso ny fitaovana famokarana. Manana rafitra famolavolana, fanamboarana ary fitiliana tanteraka izahay. Ny vokatra avo lenta dia tsy lafo amidy eny amin'ny tsena anatiny ihany, fa aondrana any amin'ny tsena any ivelany koa, toa an'i Eropa, Amerika, Moyen Orient, Korea, Japon ary firenena sy faritra hafa. Miaraka amin'ny vokatra avo lenta sy laza tsara dia azontsika ny atokisan'ny mpanjifa vaovao sy taloha. Nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra izahay miaraka amin'ireo mpivarotra an-trano sy any ivelany. Manoloana ny fotoana mety sy ny fanamby, ny orinasanay dia mifikitra hatrany amin'ny fitsipiky ny "amin'ny fiezahana manatsara ny fiainana, amin'ny siansa sy ny haitao ho an'ny fampandrosoana, ny fitantanana ho an'ny fahombiazana ".
Ity orinasa ity dia mamokatra ny andian-dahatsoratra jet firearm novel, mora ampiasaina, mora entina, azo antoka, azo itokisana ary azo ampiharina tanky manerantany ankapobeny, mihamora kokoa ny entona; Ny masinina dia mandray ny vy tsy misy fangarony 304 #, ny jiro mahery, tsy misy harafesina velively, noza, nozera no mampiasa fitaovana maty varahina mandroso, fitaovana fantsom-panafody efa nohamafisin'ny sus304, ny sarety alohan'ny soavaly na ny zoro Angle, aza mivoaka ny afo, aza vonoina ny azy ireo; Ny fiainana maharitra maharitra, miaraka amin'ny sasany ampiasaina, tsy mila miakatra alohan'ny hafanana, manafana hatramin'ny 800 ~ 1300 ℃, gazy butana rehefa mandroso ny solika, mitifitra hampiasa fitaovana fanivanana manokana hisorohana ny fitohanan'ny vava, tsotra mety, ara-toekarena, be mpampiasa amin'ny fanodinana indostrialy isan-karazany, fantson-drano, fanaraha-maso famonoana rivotra sy tetik'asa tsy tantera-drano, famokarana fiarahana tariby, enti-mody, fanamainana bobongolo, kojakoja metaly, fambolena, fanaka, fanodinana vera sy sakafo, fanamainana hafanana, fiompiana sy fanesorana volo akoho amam-borona, fanodinana vy , teknolojia zavakanto, haingon-trano anatiny, fanandramana ara-batana sy simika, zaridaina, bibikely famonoana biby fiompy, jiro arintany dia fitaovana ilaina amin'ny barbecue fitobiana an-tendrombohitra. Tongasoa ireo mpanjifa avy any ivelany sy any ivelany hitsidika sy hanoro hevitra.
3.000-5000 metatra toradroa
Firenena / Faritra iasan'ny orinasa Wujia Village, Chumen Town, County Yuhuan, Taizhou City, faritany Zhejiang, Sina
Laharana famokarana 6
Famokarana fifanarahana OEM Service OfferedDesign Service OfferedBuyer Label Atolotra
Tombam-bidy fanao isan-taona 2,5 tapitrisa dolara amerikana - 5 tapitrisa dolara
Vola miditra (%)
Eoropa Avaratra 12,50%
Azia Atsinanana 12,50%
Moyen Orient 12,50%
Azia atsimo atsinanana 12,50%
Eoropa Atsinanana 12,50%
Amerika atsimo 12,50%
Amerika Avaratra 12,50%